Ule mmetụta nyocha - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ihe nyocha nke ihe eji eme ihe (IMIT) nke a na - akpọ ule ujo nke ihe eji eme ihe, ebumnuche nke ule a bu iji chọpụta ma a ga - agbanwe ngwongwo ngwaahịa a mgbe ihe doro ngwaahịa a n’usoro ihe metutara na okpomoku. Site na ule a, anyị nwere ike inyocha nkwụsi ike nke ngwaahịa anyị n'oge njem ma ọ bụ nrụnye.
Jera preforms ule n'okpuru ngwaahịa
-Insulation ịkpọpu akụkụ njikọ (IPC)
-FTTH eriri clamps
-Low, n'etiti na elu voltaji shiee isi bolt lug.
-Fiber optic nchupu igbe, sockets
-Fiber ngwa anya splice closures
Nnwale mmetụta bụ ozugbo na nbibi, mmebi ekwesịghị ime ka ọ metụta arụmọrụ ziri ezi nke ngwaahịa n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ. Enwere ike itinye mgbakọ ngwaahịa n'okpuru ule nyocha ma nwalee maka mmetụta sitere na elu na n'akụkụ, site na ebe dara na anvil nke oke dị iche iche, Cylindrical arọ na-ada kpamkpam site na egosipụtara dị anya wee gbawaa ngwaahịa ndị a nwalere.
Testkpụrụ nyocha anyị dị ka CENELEC, EN50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 maka ngwa nkesa eletriki, na IEC 61284 maka eriri eriri fiber optic, na ngwa. Anyị na-eji ule ule na-esote ngwaahịa ọhụrụ tupu ịmalite, maka njikwa mma kwa ụbọchị, iji jide n'aka na ndị ahịa anyị nwere ike ịnweta ngwaahịa ndị na-egbo mkpa chọrọ.